musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » June Mhepo Kufamba Kudzoreredza Inoenderera Kuodza moyo
Kudiwa kunosara zvakanyanya pazasi pre-COVID-19 nhanho nekuda kwemitemo yepasirese yekufamba.
Yese inodikanwa yekufamba nendege munaJune 2021 (yakayerwa mumari yemakiromita evatambi kana maRPK) yakadzikira 60.1% kana ichienzaniswa naJune 2019.
Vanodaidzira mutyairi wepasi rose muna Chikumi yaive 80.9% pazasi kwaJune 2019.
Yese yekudiwa kwepamba yaive pasi 22.4% maringe pre-dambudziko mazinga (June 2019).
The International Mhepo Yekufambisa Sangano (IATA) yakazivisa mutyairi kudiwa kwekuita kwaJune 2021 kuratidza shanduko diki kwazvo mumisika yepasi rese neyekunze yekufamba nendege. Kudiwa kunosara zvakanyanya pazasi pre-COVID-19 nhanho nekuda kwemitemo yepasirese yekufamba.
Sezvo kuenzanisa pakati pegore ra2021 ne2020 pamhedzisiro yemwedzi pamhedzisiro kunokanganiswa neyakajairika mhedzisiro yeCOVID-19, kunze kwekunge zvataurwa zvimwe, kuenzanisa kwese kuri munaJune 2019, iyo yakatevera yakajairika dhizaini dhizaini.
Yese inodikanwa yekufamba nendege munaJune 2021 (yakayerwa mumari yemakiromita emitero kana maRPKs) yakadzikira 60.1% zvichienzaniswa naJune 2019. Icho chaive shanduko diki pane kuderera kwe62.9% kwakanyorwa muna Chivabvu 2021 maringe naMay 2019.
Zvinodiwa zvepasi rose zvevatakuri munaJune zvaive 80.9% pazasi kwaJune 2019, shanduko kubva pakaderera 85.4% yakanyorwa muna Chivabvu 2021 maringe nemakore maviri apfuura. Matunhu ese kusara kweAsia-Pacific akabatsira kudanho rakakwira zvishoma.
Yese yekudiwa kwepamba yaive pasi 22.4% maringe pre-dambudziko mazinga (June 2019), zvishoma kuwana pamusoro pe23.7% kuderera kwakanyorwa muna Chivabvu 2021 kutarisana nenguva ye2019. Kuita pamisika inokosha yepamba kwakasanganiswa neRussia ichitaura nezvekuwedzera kwakasimba neChina ichidzokera kunzvimbo isina kunaka.
“Tiri kuona kufamba negwara, kunyanya mune mimwe misika yepamba. Asi mamiriro ekufamba kwenyika dzakawanda hapana kwaanosvika padhuze nepatinofanira kuve. June anofanirwa kuve kutanga kwemwaka wepamusoro, asi ndege dzanga dzichingotakura chete 20% yemazinga e2019. "Izvi hazvisi kugadzirisa, idambudziko riri kuenderera richikonzerwa nekusaita basa kwehurumende," akadaro Willie Walsh, Director General weIATA.